News Collection: आर्यन पाउन प्रार्थना !
आर्यन पाउन प्रार्थना !
पलपलमा'गर्ल शशी खड्का हिरो आर्यनको केमेष्ट्रीबाट यति 'फिदा' छिन् कि अनस्क्रिनमा पनि उनकै अपोजिट भएर खेल्न चाहन्छिन् । रजतपट डेब्यु गर्नुअघिदेखि नै आर्यनकी 'डाइहार्ट' फ्यान बनेकी उनी आर्यनसँग फिल्म खेल्न भगवानसँग प्रार्थना गर्छिन् । 'फिल्ममा आउनुभन्दा पहिले नै उहाँका फिल्महरु हेर्दै आएकी थिएँ' राजु गिरीको पछिल्लो प्रोजेक्ट 'चन्द्रावती'मा व्यस्त हिरोइनले भनिन् 'उहाँको एक्टिङको म निकै प्रशंसक । लभरव्वाइका रुपमा त गजब लाग्छ ।'
सुटिङ भैरहेको सिनेमा 'चन्द्रावती'मा उनी चन्द्रावती नाम गरेकी राजकुमारीको भूमिकामा छिन् । जहाँ उनले एक्सन हिरो आयुष रिजालसँग रोमान्स गर्नेछिन् । घरमै बसेर स्क्रिप्ट पढ्दै चन्द्रावती हुनुको अभिनय गरिरहेकी छिन् उनी । उकेश दाहाल निर्देशित 'पलपलमा'बाट डेब्यु गरेकी शशीले त्यसपछि अहिलेसम्म पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । नयाँ प्रोजेक्टहरु धमाधम हात लाग्ने क्रम जारी छ उनलाई । मेरोसिनेमा डटकममा पनि मोडलिङ गरेपछि यी हिरोइनको चर्चा चुलिएको छ । केही दिनमै नयाँ प्रोजेक्टमा साइन गर्ने मुडमा छिन् उनी ।
शशीका फ्यानहरुलाई खुशीको कुरा -केही दिनमा सुरु हुने एक हिन्दी म्युजिक भिडियोमा पनि उनले अभिनय गर्नेछिन् । 'पलपलमा'पछि उनी म्युजिक भिडियो मोडलिङमा व्यस्त छिन् । साँच्चिकै केटीहरुले पछ्याएर हैरान हुने लभरव्वाइ आर्यन शशीले प्रार्थना गर्छिन् रे भनेर सुन्दा कस्तो प्रतिकि्रया जनाउलान् ?